အမျိုးသားထုကြီးကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်သွားစေမယ့် နန်းမွေစံရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Ever Best
EverBest M | May 9, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တွေထဲ မှာ တစ် ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်ပြီး အနု ပညာ အလုပ် တွေ ကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေ ကာ ကြော်ငြာ တွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက် ရှိနေ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ သူမ က တော့ မိန်း ကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .။
အမိုက် စား ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှု ကွန် ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမ က တော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . ။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ် တော် လေးဆို ရင် လည်း မမှားပါ ဘူး ။ သူမ က တော့ ယခု မှာ အလန်း စား ဖက်ရှင် လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှ တရားလေး ပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေးတွေ ပေးနေခဲ့ ပါ တယ် … . ။
သူမ ရဲ့ အသည်းယား စရာ ပုံစံလေး နဲ့ ရိုက် ထားတဲ့ ဗီဒီယို ပုံရိပ်လေး တွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . ။ ချစ် ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံ လေးနဲ့ ကြွေ လောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေး တွေကို အောက် မှာကြည့်နိုင် ပါ တယ် နော် … . ။
ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ က ေတာ့ လက္ရွိ မွာ ေအာင္ျမင္ လ်က္ ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ေတြထဲ မွာ တစ္ ေယာက္ အပါ အဝင္ ျဖစ္ၿပီး အႏု ပညာ အလုပ္ ေတြ ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေန ကာ ေၾကာ္ျငာ ေတြကိုလည္း ရိုက္ကူးလ်က္ ရွိေန သူေလးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ေလး ေတြကို ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိတဲ့ သူမ က ေတာ့ မိန္း ကေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ေရာ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကိုပါ အခိုင္အမာ ရယူထား နိုင္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .။
အမိုက္ စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပးေလ့ရွိတဲ့ သူမ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္အမာ ရယူထားနိုင္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အခ်စ္ ေတာ္ ေလးဆို ရင္ လည္း မမွားပါ ဘူး ။ သူမ က ေတာ့ ယခု မွာ အလန္း စား ဖက္ရွင္ ေလးေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရားေလး ေပၚလြင္ေနၿပီး အမိုက္စား ပိုစ့္ေလးေတြ ေပးေနခဲ့ ပါ တယ္ … . ။
သူမ ရဲ့ အသည္းယား စရာ ပုံစံေလး နဲ႔ ရိုက္ ထားတဲ့ ဗီဒီယို ပုံရိပ္ေလး ေတြဟာ ပရိသတ္ ေတြကို အခ်စ္ေတြ ပိုေစခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံစံ ေလးနဲ႔ ေႂကြ ေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ၿပီး အဆိုပါ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ေအာက္ မွာၾကည့္နိုင္ ပါ တယ္ ေနာ္ … . ။
ဖြူဖွေးဝင်းအိနေတဲ့ ရင်သားအလှတွေ အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ Lလစ်ရှားရဲ့ ပုံရိပ်များ